Esinye sezifo ezivamile izifo zabesifazane kuyinto Hyperplasia endometrial. Kuyingozi ngoba Ungafaka umdlavuza futhi zibangele inkinga yokungabi nenzalo. Kunezinhlobo eziningana izifo eziholela inqubo abulalayo ne degree of okungenzeka obuhlukahlukene.
ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kungenzeka kuphela ngemuva Histology endometrial etholwe biopsy noma curettage. Kugcine iyona zokukhwabanisa kanye lokwelatshwa. Its kangcono ukuba ngaphansi kokulawula hysteroscopy. Lokhu kwandisa ukusebenza kahle kanye nokuphepha curettage.
udokotela Suspect Hyperplasia can ngesisekelo izikhalazo lesiguli, kanye imiphumela US. Ngalesi cwaningo kunqunywa ukushuba we endometrium. Omningi inani layo zingase zibe Indlela Hyperplasia. Nokho, ukuphumelela ultrasound ngo sitholakele lesi sifo% 80 kuphela.
Ngakho, endometrial izimpawu Hyperplasia:
opha kwesibeletho okujula nobude obuhlukahlukene;
zokubona phakathi nezikhathi;
nezikhathi zingase kuyochichima futhi kubuhlungu;
Nokho, lesi sifo kungavuka futhi asymptomatic. Hyperplasia Endometrial kwabesifazane postmenopausal livela lesizalo ukopha, okuyinto zibhekwa njengemikhiqizo isimo precancerous we endometrium.
Histology ivumela ukucacisa uhlobo Hyperplasia. Kubalulekile ukukhetha amacebo sokwelashwa Izibikezelo. Inketho ezingemnandi neze - kuyinto Hyperplasia atypical, okuyinto engcono kakhulu kunanoma iyiphi enye lukhumuzeka zibe umdlavuza. Kudinga observation gynecologists, oncologists.
Uma kungatholakali ngokushesha ukuthi uphethwe enjalo wenziwa nabesifazane asebeneminyaka efanele yobudala zokuzala ngubani usafuna unezingane, basuke kakhulu belulekwa ukhulelwa emva kokuphothula ukwelashwa. Khona-ke ablation endometrial wenziwa, ngemva kwalokho yokuzala engasakwazi. Uma lesi sifo ivela, umbuzo ukususwa kwesibeletho liphuma khona.
Endometrial Hyperplasia menopause, engesiyo amenable ekwelashweni ngoludala, kuyinkomba lokungenela kuhlinzwa. Kwaqhubeka ablation endometrial noma hysterectomy, ikakhulukazi nge ifomu atypical.
ukwelashwa okulondoloza wenziwa hormone Hyperplasia. Isimiso umthamo kanye ekwakhiweni akhethiwe ngamunye. Ukusetshenziswa COCs, progestin, izidakamizwa ezibangela i menopause yokufakelwa. Kungcono phambi enquma ukwelashwa ukuchitha luhlolo hormone.
Kukhethwa ukwelashwa incike yobudala, comorbidities, isifiso sokuba izingane, uhlobo lwesifo, ithuba lokubheka onguchwepheshe, iziguli eziningi kakhulu ufisa. I Hyperplasia we endometrium, izimpawu zazo ziye achazwe ngenhla kwenzeka ngenxa ukungalingani hormone lapho esengeziwe estrogen futhi progesterone ezingeni lehliselwa.
thuthuva ezinjalo umphumela anovulation, isimila esibelethweni, polycystic syndrome esibelethweni, ukukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, ngenxa singenele ama-hormone i-estrogen kungabangela Hyperplasia endometrial. Izimpawu zesifo, ezifana kwegazi, ukukhathala, ubuthakathaka zenzeka ukulahlekelwa lapho enkulu igazi, lapho isiguli singena esibhedlela.
Uma uphumelele, ukuphathwa ukuvimbela yokuphindela isidingo isifo ukuze angabonwa nguchwepheshe sekuphele iminyaka emihlanu yokwelapha i-hormone, futhi izinyanga ezingu-6 ngemva kokuhlinzwa. Njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, eyenziwa ngihlolwa, imisindo ephansi, luhlolo histological.
Ngakho, Hyperplasia endometrial, izimpawu zazo - kuyinto lesizalo ukopha, ukungazali, umjikelezo neziyaluyalu, ungaya inqubo ebulalayo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ukuqhuba ukwelashwa esifike ngesikhathi, okungase olandelanayo kanye / noma okusebenza.